Gypsy nke Vintage Maxi Dress - Buddhatrends
Azụ ahịa Flash
Maxi Gypsy Maxi Dress
Burgundy / S Burgundy / M Burgundy / L Burgundy / XL Burgundy / XXL Burgundy / XXXL Burgundy / 4XL Burgundy / 5XL Purple / S Purple / M Purple / L Purple / XL Purple / XXL Purple / XXXL Purple / 4XL Purple / 5XL Black / S Black / M Black / L Black / XL Black / XXL Black / XXXL Black / 4XL Black / 5XL
Nwee obi ụtọ ma dị mma n'eme uwe Maxi Gypsy Maxi. Uwe eji aka ya, akwa aka na olu Ugwu mere ka ejiji a bụrụ ihe dị mma ma dị mma maka ụmụ nwanyị nke ụdị na nha.
A na-enweta ya na Dark Purple, Claret Red, na Black, uwe elu a na-ejikwa amamihe tinye nnukwu akpa maka ekwentị gị, obere obere akpa ma ọ bụ igodo.
Uzo ya na olu ndi ozo, akpukpo azu ma obu akwa eriri, enweghi ike inweta ya!
Style:Ihe eji eme ihe
Ejiri aka: V-Olu
oh, ike, -xxl kekere ubé)))))))))) nwere ike iyi)) 80 dị elu, elu 174. karịsịa na aka aka, chere) размерчик obere otu oge na iji. ụkpụrụ ụkpụrụ. ọ dịghị mma, ọ dị mma ịmetụ aka.
M bụ hxl na mkpụmkpụ maka ito 176
Onye ozi na-enyefe ya. na-emekarị. mgbe ị gụsịrị akwụkwọ edemede na 50-52 Russia nyere 5xl iwu. n'efu! Enwere m obere ma ọ dịkarịa ala 4 xl. akpa ego dị ala, na-ahụkarị ha. Ọganihu nke 175 na ala dị n'elu ụkwụ ụkwụ. M ga-etinye na. Na n'ozuzu afọ ojuju na ịzụta! ma, ọ bụ ezie na ákwà bụ owu, ma ọ bụghị ihe dị mkpa!
Mee obi ụtọ, nweta ya na 32 ụbọchị. ịṅa ntị na nyocha, buru ibu buru ibu, na ọ ga-ekwe omume ma ọ dịghị eme, uwe ogologo, na-eyiri obere oge karịa ala. ma ọ bụghị ihe ọjọọ, aka uwe zuru oke, na ogologo ma ọ bụ mkpa ntakịrị mkpịsị ụkwụ, ma ọ bụ naanị ije ije na akpụkpọ ụkwụ;))). tupu ị etinye aka, nke ahụ ga-edozi anya dị ka uwe kwesịrị iyi. nke mmiri ozuzo, ihe ndị dị mma na igbe ahụ dị ezigbo njọ, e nwere ụyọkọ eri, ghaghị ịkọwapụta, tie na ịkpụ, nke ọma, eji m akpa ezigbo ego karịa ka ọ dị mkpa. N'okwasị m, n'olu adịghị akwa miri emi. eleghị anya ị ga-edozi ụdị dị iche iche na agba. Akwadoro m.
Akwa akwa !!! Enwere m mmasị nke ukwuu, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-ewere razmerchik ọzọ, nke ahụ ga-abụ ohere karịa) ihe a na-enye obi ụtọ dị ukwuu) Enwere m obi ụtọ dị ukwuu)) Onye na-ere ahịa na-akwado)) Enwere m obi ụtọ !!! İnya-a-_ ^ (Nne na-abiakwa nso)
Ezigbo mma, agba dị oke!
Ndị na-ege ntị gere ntị wee were 2 buru oke ibu ... n'ubu ha bụ nkịtị ma olu dị nnọọ ukwuu .. Amaghị m otú ga-esi bụrụ ma m buru ibu. ma n'ozuzu i nwere ike iyi ... bu boho!
M 165 cm na arọ 65 kg dị mma! mega ngwa ngwa, nke a bụ uwe nke abụọ! ugbu a ọzọ chọrọ)! mma dị mma!
Ìhè, ọ bụ ezie na okpo, ebe dị mma obodo ahụ dị mma. ya 52 Russian weere xxl. ọ bụrụ na ị na-asa ahụ, ị ​​ga-ahụ ya, dị ka ọ ga-eme mgbe ịsachara. ogologo dị n'okpuru ụkwụ ahụ na 164. na-aka obere obere, ị nwere ike ehulata. 4xl 60 Russia. ogologo oge, ga-emetụta, ma ọ dị nnọọ mma! anaghị anụ ísì!) onye ozi na-eweta ebe obibi ziri ezi! M tinye 5!
Nkwonkwo osisi okpukpu abụọ, dị mma na aka! ihe na-atọ ụtọ. Enwere m mmasị obodo ahụ. Daalụ!
M weere onwe ya, na foto nwa m nwaanyị. Enwere m ntakịrị elu ma karịa. ma kpọmkwem were n'efu. niile haziri. na agba na ibu na nnyefe oge! naanị otu mbe, na aka ahụ bụ ntụ ntụ, ntakịrị mmetụta na-emetụta.
M. ********** a I.
Mgbanwe ihu igwe kwekọrọ n'eziokwu! ya mere ọ dị mma iji nha buru ibu. anyị nwere ọtụtụ. uwe ahụ dị nnọọ ukwuu ma ogologo oge. mgbe ịsachara adịghị ada mbà ọbụna n'okpuru elu okpomọkụ
Uwe dị mma, ìhè, agba dị mma, na Og 105, banyere 105-magburu onwe ya. ebe ntanetị, ma ọ dị oke egwu.
E ji nlezianya kenye ya akara, izu abụọ mgbe ịkwụ ụgwọ na Moscow. onye na-ere ahịa mgbe niile. àgwà ngwaahịa dị mma, usoro dị mma, enweghị nkwụsị nke eri. ma m dị ogologo ma ogologo oge (176 cm). ọ bụ ezie na a na-esecha mmiri mmiri. buru n'uche. na nnọọ obi ụtọ. ihe iji tụọ ọkpụrụkpụ. egosiri na aka uwe foto. Ana m etinye ụlọ 50-52 n'ụlọ. aka uwe.
mara mma. onye na-ere ere dị mma ma zaa ajụjụ m nile. ukwuu kwadoro ụlọ ahịa a.
Uwe dị ka ya, agba gauze na agba. na-anọdụ ala ma ọ bụghị nnukwu. ezie na o kwere omume na S ga-adaba. gara n'ihu ruo ọnwa abụọ.
A na-eji akwa akwa akwa, ákwà dị nro. dlya n'ụlọ shikarno. nyere 6hl 58 oke oke.
Ezigbo 2 izu tupu St. Petersburg abanye na 52-54 size xl abụghị ihe ndị na-agbanwe agbanwe bụ ihe dị ezigbo ụtọ
Uwe ima! na akwa ahụ karịa ka m na-atụ anya na mpempe akwụkwọ dị iche iche, nke mara mma, n'ozuzu, enwere m obi ụtọ. mmụba nke 163, 63 93 og na XNUMX na m buru ibu m nọrọ n'ozuzu.
Ịga na mpaghara Moscow (Russia) 2.5 izu !! eji ejiji, ma ọ bụrụ na ị mara oke: 46 (95) weere ma mee mkpebi ziri ezi. ọganihu nke 164 dị elu n'elu ụkwụ na mkpụmkpụ aka ma m na-eme atụmatụ ịcha uwe aka mkpụmkpụ. n'akụkụ m ga-abanye n'úkwù, ma ọ bụ maka uto m, ebe ọ bụ na uwe ejiji akwa na-abụkarị nnwere onwe dị otú ahụ. ákwà ahụ dị mma ma ọ bụghị oke mkpa. A na-enyocha ihe niile niile-ihe niile dị mma. ihe e ji eme ya bụ naanị agba acha, nke ọ bụ, ma edozi ya. E nwere akpa! ma ha dị ntakịrị ntakịrị maka m-aka na-enweta, ma iru ala adịghị.
56 Russian weere 5hl dị nnọọ ukwuu, ụda belt (na foto) nwere ike ịbụ ushyu. n'otu n'ime oghere akpa ndị uwe ahụ nwere agba agba ndị ọzọ, ma ọ bụ obere ihe. akwa akwa, n'ozuzu afọ ojuju. ga-enye iwu ọzọ, nke dị ntakịrị
Na-adabara n'ụzọ zuru oke, dị nnọọ ọcha. dị ka ụdị nke boho na-atụ aro. ogologo n'okpuru ụkwụ ahụ, agba mara mma, jupụta. akpa ego dị ala, ma nke a adịghị mkpa. gara Moscow otu izu na 3 izu dina Vnukovo. obi ụtọ na uwe.
Uwe dị jụụ, dị nnọọ nro na ntụsara ahụ. Enwere m ekele nke ukwuu) Ogologo m, s size zuru oke n'ala. MSK na-aga izu abụọ.
Echekwaara nne ya, ọ masịrị ya))
Uwe ọma, owu. mgbe a sachasịghị awụfu na obodo. ọ dị, dika dị na foto ahụ, ọ dị mkpa ka ị kpọkwuo di na nwunye. Enwere m xxl, ọ bụ ezie na m dị mita m. ma achọrọ m ile anya dịka na foto ahụ. adighi enwu. ekele ị na-ere!
Agba anaghị acha odo odo. Kwụsị azụ. Esemokwu kwụrụ ụgwọ
agba bụ magenta, ọ bụghị claret, ma ọ bụ odo odo. Ma enwere m uwe ahụ nke ukwuu, ọ na-achazi odo odo. Enwere m 5'9 "na ịchọta uwe ogologo zuru oke bụ ọrụ ebube. M ga-azụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agba ọ bụla a na-enye, ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị!
Onyinye ngwa ngwa na ejiji mara mma. Hụrụ ya n'anya
Hụ uwe ahụ! Amaghị m banyere nha, ya mere m nyere ya iwu na 4x. m ga - ewelata ma were ya n .. ma nyezie onye na - esote na 3x. ekele onye na ere!
Nkwenye ngwa ngwa
Ihe niile dị mma. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ! Zụrụ uwe ya. Daalụ!
AAA kacha mma, ekele.
Uwe dị mma! n'ezie mmasị àgwà. M nyere onye ọzọ iwu ka ọ dị obere.
Enwere m nnọọ mmasị na uwe abụọ ahụ! karịrị ihe m tụrụ anya na mma ngwaahịa ahụ.
Akwa akwa! nnukwu! nke ukwuu! mma mere! zuru oke sewn!
Ihe okike, n'efu, uwe mara mma n'oge niile. 50-52 xxl. onye na-ere ahịa, nnyefe ngwa ngwa. nke a bụ usoro 5th m. Daalụ!!!
Uwe mara ezigbo mma! akwa akwa, okpukpu abụọ. sewn ọma. ogologo nke ala. bolshoe ekele na-ere!
Mmasị a na-amasị m. Ọ na-eme ihe dị mma na àgwà dị mma.
Uwe anaghị abịa. e weghachiri ego ahụ.
Daalụ. Enwetara m ya taa. ọ bụ kpọmkwem dị ka a na-atụ anya ya.
Nkwenye ngwa ngwa, wetara onye ozi ahụ uwe mara mma na foto ahụ. n'obosara, dị ka
Daalụ!!! Agwara m 4 ihe, niile na-abanye n'otu ngwugwu na onye ozi n'ụlọ.